Friday October 26, 2018 - 12:53:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah ayaa si xun loogu dhiig bixiyay weeraro isdaba joog ah oo muddo bil ah ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya.
sawir hore ciidamo Itoobiyaan ah oo Somalia ku sugan
Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan oo ah waaliga gobolka Hiiraan uqaabilsan Xarakada Al Shabaab ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu si faah faahsan uga hadlay wxii ciidamada Itoobiya ku qabsaday gobolka Hiirana.
Wuxuu sheegay in muddo 30 maalmood xiriir ah ay Itoobiyaanku la kulmayeen weeraro dhabbagal ah, wuxuu ka sheekeeyay qisooyin yaab leh oo ciidamada huwanta ah ku qabsaday wadada laamiga ah ee xiriirisa Beled Weyne iyo Buula Burde, ciidamada oo isugu jiray Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ayaa awoodi waayay in Meydadka askarta laga dilay ay aastaan taas bedelkeedna toban maalmood wax ka badan ayay meydadku udul saarnaayeen gaadiidkooda.
Ujeedka ciidamada huwanta ah ugu safrayeen wadada laamiga ah ayuu ku sheegay Itoobiyaanka oo doonayay in ay kala bedelaan ciidamada uga sugan deegaanka Halgan islamarkaana degmada Jalalaqsi kasoo qaataan qalab melleteri oo ciidamada Jabuuti qaab tabal caara ah uga heysteen.
Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan wuxuu carrabaabay in maleeshiyaadka DF-ka lagu ihaaneeeyay gobolka Hiiraan kadib markii ciidamada Itoobiya ay carra tuur isaga dhigeen weerarada ka imaanaya dhanka Al Shabaab.
Inkaban 50 weerar ayay lakulmeen ciidamada huwanta ah ee mudada 30-ka maalmood ah ku safrayay waddo masaafadeedu aysan ka badneyn 170Km.
Taliyaha guutada 27-aad ee ciidamada dowladda oo qudhiisu safarka qeyb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamadooda lagu beegsay illaa 34 qarax oo uga yimid dhanka Al Shabaab.